Göteborg oo caawa looga baroordiiqayo dabkii ka dhacay 19 sanno ka hor | Somaliska
Caawa oo kale marka ay taariikhdu madaxda la sii galeeysay 30-kii bishii oktoobar sanadkii 1998-dii, waxaa goob lugu caweeyo ka dhacay dab galaaftay nolosha 63 dhalinyarro oo habeenkaas ku qabay xaflad dhalasho ah.
Goobtu waxeey ku taalay xaafadda Lundby ee degmadda Hisingen. Dhalinyarro kor u dhaafay saddex boqol ayaa habeenkaasi u tagay iyo dabaaldaga dhalasho sanad guuro . Hase ahaatee goobta oo faraxad ka muuqatay ayaa isku badashay mid ay ka dhacday musiibo Qaran. Wuxuu dabkani ahaa dabkii ugu qasaaraha badnaa abid ee ka dhacay magaaladda Göteborg. Xilligaasina waxaa magaaladda la iclaamiyey ineey tahay magaalo muruggo, iyadoo calanka dalka muddo saddex cisho ah hoos loo dhigay.
Gabar ka mid ah dhalinyaraddii ka bad baaday dabkaas oo ka sheekeeyneysay dabkaasi ayaa tiri “Waxaan goobta u tagnay xaflad dhalsho oo afartaneeyo qof ay dhiganayeen, kolkaan tagnay ayaan aragnay in meeshu ay joogaan dad aad u farro badan oo jawiguna xiiso gaar ah lahaa.Mana garanayo dabka sidii ku biloowday waxaan ka war helay dab dhacay iyo kala orod meesha ka bilowday” ayey tiri gabadhaasi.
Dhinaca kale waxaa dhalinyaradii ku dhimatay oo gabdho iyo wiilal leh ka mid ahaa lix wiil oo soomaali ah. Sten Schääf, wuxuu xilligaasi ahaa sarkaal ciidan mar uu isagana ka sheekeynayey dabkii dhacay wuxuu sheegay in uu soo gaaray goobta markii lugu wargeliyey in goob dhalinyarro iskugu timid uu ka dhacay dab dabkiina uu noqday mid xoogan oo dadkii is dhex yaac ku riday.
“Muuqaalka indhaheyga aan ka baxeeyn waxeyd aheyd markii aan arkay aabbo gabadhiisa oo meyd aheyd 15 daqiiqo uu isku dayey inuu bad baadiyo” Wuxuu ugu dambeyntii Schääf sheegay in badi dadkii dhintay ay u dhinteen sunta qaaca oo galay. Musiibadan ayaa ku dhintay 63 dhalinayrro waxaana ku dhaawacmay 200.
ayaa qoray warbixintaan of afsoomali aqaanin soon barta afsomali